I-China ye-CPLA ePlasitiki engenasiseko Sokuphelisa Isixhobo Esisetyenziswayo Esihlaziyiweyo - IPhepha leNgxowa yePhepha kunye neMveliso | Gianty
I-CPLA yeplasitiki engenasiseko Sokuphelisa I-Cutlery ekhutshiweyo-Ingxowa yephepha
Le setethi yokucheba iqukethe isitshixo se-CPLA, imfoloko, isipuni kunye namachaphaza. Ukuze kube lula kuwe, iseti igcwele kwingxowa yephepha. Ilungele ukusetyenziswa ngezitya ezishushu, ezenza zilungele iinjongo zohambo. Ilungele ukusetyenziswa kwawo nawuphi na umsitho okanye indibano yangaphandle!
Esi sisongelo somatshini osisongelo seCPLA somqhaphu ngemela, ummese, isipuni, kunye nomphetho lulongezo elifanelekileyo ekusebenzeni! Eyona ndlela ilungileyo kwiziko leplastikhi esekwe kwipetroleum esetyenziselwa izinto ezingasetyenziswanga, le ndawo yokusika ibandakanya imfoloko, isitshixo kunye nesipuni esenziwe ngePLA, iplasitiki esekwe kwisityalo eyilwe ngezixhobo ezinokuphinda zisebenze ukuze sinciphise iimpembelelo zokusingqongileyo. Izandla zabo eziqinisiweyo zixhathisa ukugoba nokuqhwitha ukubonelela ngomgangatho, ukusetyenziswa kwenkonzo enye. I-napkin iyabandakanywa, ivumela iindwendwe zakho ukuba zisule ngokulula ezandleni okanye ukucoca ukuphalala ngengozi. Ukuza nganye nganye yenzelwe ucoceko oluphezulu, le kititi ye-cutlery liqabane elikhulu kwizidlo zokutya okanye zokuhamba. Ngobume obutsha, bokwenziwa kwekristali, i-cutlery nganye iyakwazi ukumelana nobushushu ukuya kuthi ga kwi-85 ℃, ibenze balungele ukusetyenziswa kukutya okutshisayo nokubandayo.
Ukuchetywa kwethu akulungelanga ukuba kuprintwe. Ingxowa inokuphawulwa ukusuka kwinani elincinci loku-odla iziqwenga ezingama-200.000. Sinikezela ngezixhobo ezahlukeneyo zokusika ngokweemfuno zabathengi. Unokukhetha kuzo naziphi na izinto zethu zesitokhwe kwaye uchaze indibaniselwano enqwenelekayo yezinto. Ngolwazi oluthe kratya, ungathumela imibuzo ku- info@ecogianty.com.
• Inokushintshwa ngokukhululekileyo
Into I-CPLA 7 intshi ye-Cutlery Kit ngephepha lePhepha
Umxholo isitshetshe + imfoloko + isipuni + ipani
Umbala we-cutlery Mhlophe, Mnyama, Mhlophe
Isixhobo seBhegi iphepha lokuzoba
Ubunzima ummese 4.5g, fork 4.5g, isipuni 4.5g
Ubalo lweCarton Iipakethi ezingama-500
Ubungakanani bebhokisi 64 * 24 * 48cm
Into I-CPLA 6.5 intshi ye-Cutlery Kit ngephepha lePhepha
Ubunzima ummese 4.3g, ifoloko 4.4g, isipuni 5.5g
Ubungakanani bebhokisi 64 * 23 * 50cm
Into I-CPLA 6 intshi ye-Cutlery Kit ngephepha lePhepha
Ubunzima ummese 3.5g, fork 3.5g, isipuni 3.5g
Edlulileyo: I-CPLA + I-bamboo esekwe kwizityalo engasetyenziswanga ePlasitiki engenasiseko i-6 intshi
Okulandelayo: I-CPLA yeplasitiki engenasiphene ye-Sustainable Renewable Cutlery-Ibhegi engagungqiyo
Isixhobo sokuSika seBiodegradable
Isixhobo sokusika esingenanto
Iseti yokuSika eyiCompost
I-Cpla Cutlery Kit
Cpla Ukucofa iseti